काठमाडौं, असार १९ : कप्तान लियोनल मेसी स्पेनिज जाइन्ट बार्सिलोना छाड्ने तयारीमा छन्। पछिल्लो समय प्रशिक्षक क्वेट सेटिन र कोचिङ स्टाफसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि मेसीले बार्सिलोना छाड्ने तयारी गरेका हुन्।
पछिल्लो समय खेलाडी चयनमा दबाब दिने गरेको आरोप मेसीमाथि लाग्दै आएको छ। सो आरोप व्यापक बन्न थालेपछि मेसी बार्सिलोना छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ। बार्सिलोनासँग मेसीको सम्झौता सन् २०२१ को जुनमा सकिँदै छ। अब मेसी बार्सिलोनासँगको सम्झौता नवीकरण गर्ने पक्षमा नरहेको स्पेनिस रेडियो कादेनासले जनाएको छ।
अघिल्लो साता सेल्टाभिगोविरुद्धको खेलको ‘कुलिङ ब्रेक’मा मेसीले प्रशिक्षक सटिन र सहायक प्रशिक्षक इडर सारबियालाई बेवास्ता गरेका थिए। त्यसपछि नै मेसी र कोचिङ स्टाफबीच सम्बन्ध राम्रो नरहेको सहतमा आएको थियो।
बार्सिलोना २–२ गोलको बराबरीमा रोकिएको सो खेलमा खेलाडी परिवर्तनको विषयमा मेसीसहित बार्सिलोनाका खेलाडी र प्रशिक्षक सेटिनबीच विवाद भएको थियो। सो खेलमा सेटिनले दोस्रो हाफमा रुगी पुचको स्थानमा अर्थर मेलो र दुवै गोल गरेका सुआरेजको स्थानमा एन्टिनियो ग्रिजम्यानलाई मैदान छिराएका थिए।
क्लब व्यवस्थापन र कोचिङ स्टाफको पछिल्लो व्यवहारप्रति मेसी खुसी नभएको बताइएको छ। पछिल्लो सयम बार्सिलोनाको खराब प्रदर्शनको सम्पूर्ण दोष आफूमाथि लाग्न थालेपछि मेसी क्लबसँगको सम्झौता नवीकरण नगर्ने पक्षमा पुगेका थिए।
मेसीले केही समयअघि मात्र बार्सिलोनासँगको सम्झौता एक वर्ष थप गरेका थिए। उनको सम्झौता यही जुनमा सकिँदै थियो। त्यतिबेला पनि मेसी सम्झौता नवीकरण गर्ने पक्षमा थिएनन्, तर बार्सिलोनाका खेल निर्देशक तथा पूर्वसहकर्मीको इरिक अविदले अथक प्रयासपछि मेसीले गत फेब्रुअरीमा सम्झौता नवीकरण गरेका थिए।
मेसीले क्लब छाड्ने चर्चा चलेपछि क्लब पदाधिकारीहरु मेसीलाई क्लबमै राख्न प्रयास थालेका छन्। यो विषयमा बार्सिलोनाले मेसीको बाबुसँग कुरा गरिरहेको बताइएको छ। फ्यान र समर्थकले पनि मेसीलाई बार्सिलोनामै राख्न दबाब दिन थालेका छन्।
बार्सा छाडे कहाँ जालान् मेसी ?
मेसी बार्सिलोनाकै एकेडेमीका उत्पादन हुन्। बार्सिलोनालाई अहिलेको उचाइमा पुर्‍याउन उनको योगदान अहम छ। क्लब व्यवस्थापनसँग सम्बन्ध चिसिँदै गएपछि मेसी क्लब छाड्ने तयारीमा पुगेका छन्। मेसीले बार्सिलोना छाडे कहाँ जान्छन्? सबैले चासोका साथ हेरेका छन्।
विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी मेसीलाई भित्र्याउन युरोपका धेरै क्लब लाग्ने निश्चित छ। तर, उनी इंग्लिश क्लब म्यान्चेष्टर सिटी जाने सम्भावना अधिक छ। किनभने मेसीका सबैभन्दा प्रिय प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओला सिटीमा छन्।
यस्तै, एन्टेनियो कोन्टोको प्रशिक्षणमा रहेको इन्टर मिलान पनि मेसीलाई अनुबन्धन गर्न चाहन्छ। अघिल्लो सिजन नै इन्टरले मेसीले भित्र्याउने इच्छा देखाएको थियो।
युरोपका ठूला क्लब नभई मेसी आफ्नो बाल्यकालको क्लब ‘नेविल्स वल्र्ड बोइज’ पनि फर्कन सक्ने छन्। मेसीले पटक–पटक आफू पुनः नेविल्सबाट खेल्न चाहेको बताउँदै आएका छन्। बार्सिलोना आउनुअघि ६ वर्षको उमेरमा मेसीले नेविल्सबाट खेलेका थिए।
कतिपयले के पनि भनिरहेका छन् भने मेसीले बार्सिलोना छाडेसँगै आफ्नो फुटबल करिअर टुंग्याउने छन्। ३३ वर्षीय मेसी पछिल्लो समय खेल खस्किएको छ। र, उनी मैदानमा केही थकित देखिन थालेका छन्। त्यसैले मेसीले बार्सिलोना छाड्दै आफ्नो फुटबल करिअर पनि टुंग्याउने अड्कल सही पनि हुन्छ सक्छ।
तर, उनका समर्थक सन् २०२२ को कतार विश्वकपसम्म मेसीलाई मैदानमा देख्न चाहन्छन् र, उनले विश्वकप उपाधि उचालेको हेर्न चाहन्छन्।
Published Date: Friday, 3rd July 16:47:48 PM